लाली गुराँस : घाँटीमा केही अड्कियो ? सेवन गर्दा यस्ता छन् अचूक औषधि र फाइदाहरू – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७६, १४ भाद्र शनिबार १७:३८
लाली गुराँस : घाँटीमा केही अड्कियो ? सेवन गर्दा यस्ता छन् अचूक औषधि र फाइदाहरू
एजेन्सी, काठमाडौं। यतिबेला गुराँस फूल्ने मौसम सुरु भइसकेको छ । पहाडी क्षेत्रमा ढकमक्क गुराँस फूलेर जंगलनै हराभरा भएको होलान् । गुराश फुलेको देख्दा मोहित नहुने सायदै होलान । यसले मानिसलाइ मन्त्र मुग्ध बनाउछ ।त्यसो त लाली गुराँस नेपालको राष्ट्रिय फूल पनि हो ।
त्यसैले यस फूलप्रति हाम्रो भावनात्मक प्रेम र सम्मान पनि छ । गुराँस हेर्नमा जति राम्रो छ, उत्तिकै गुणकारी पनि । यसको औषधिय महत्य पनि उत्तिकै हुन्छ ।गुराँसको जुस कलेजो, मृगौला जस्ता समस्यामा निकै उपयोगी हुन्छ ।गुराँसको जुस बनाएर सेवन गर्दा हड्डीको दुखाई समेत ठीक हुन्छ ।
गुराँस एउटा सिजनमा मात्र पाइने भएकाले अन्य बेला प्रयोग गर्नका लागि यसको फूललाई घाममा सुकाएर राख्न सकिन्छ ।घाँटीमा कुनै खानेकुरा अड्किएको बेला गुराँस खानुपर्छ, ठीक हुन्छ ।। यो रातो, गुलावी, सेतो आदि रंगको हुन्छ ।रातो रंगको गुराँस पोषकतत्वले भरिपूर्ण मानिन्छ । यसको औषधिय गुण पनि उत्तिनै छ ।हृदय रोगलगायत केहि गंभिर रोगमा समेत गुराँसको जुस सेवन गर्नु लाभदायक हुन्छ ।
PREVIOUS Previous post: कृषि : यो वर्ष उन्नत बीउको प्रयोग भएकाले धान उत्पादनमा वृद्धि हुने अनुमान
NEXT Next post: विसं २०८५ सम्म शिक्षित नेपाल बनाउने लक्ष्य